मानसिक स्वास्थ्य र मनोवल बढाउन ध्यानको प्रयोग गर्ने कि ?
१८ चैत्र २०७६, मंगलवार
एस.बि. प्रधान , १२ चैत्र २०७६, बुधबार, ०२:०० pm
अहिले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापीरुपमा महामारी फैलिरहेको अवस्थामा समयमै सतर्कता अपनाउने दृष्टिले नेपालले पनि देशभरि एकहप्ता लकडाउन गरेको छ । यस स्थितिमा आमनाग।िकलाई मानसिक चिन्ता र तनावले सताउनु अस्वाभाविक हैन । यस्तो अवस्थामा मानसिक तनाव, चिन्ताबाट मुक्त हुन, मानसिकरुपले स्वस्थ रहन र मनोवल उच्च राख्नकोनिम्ति पूर्वीय दर्शनमा आधारित योग, प्राणायाम र ध्यानको ठ्ुलो महत्व रहन्छ । योग शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको निम्ति अति आवश्यक छ । योग अन्तर्गत अनुशासन, शारीरिक व्यायामका साथै प्राणायाम र ध्यान पनि पर्छन् । मन, वचन र कर्ममा एकरुपता भएको अनुशासित र स्वस्थ व्यक्तिलाई नै योगी भनिन्छ । योगसूत्रका प्रणेता पतन्जलीले चित्तको वृत्ति निरोध गर्नु अर्थात् मनको चन्चलतालाई नियन्त्रण गर्नुलाई नै योग भनेका छन् ।
यहां विशेषगरी ध्यानकाबारेमा चर्चा गरिने छ । मानिसको शरीर, श्वासप्रश्वास र मनवीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । तसर्थ ध्यान सुरु गर्नु अघि सही आसन र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी सामान्य अभ्यासकाबारे जानकारी राख्नु उपयोगी हुन्छ । पतन्जल योगसूत्रले जुन तरीकाले बस्दा सुखपूर्वक बस्न सकिन्छ त्यसैलाई आसन भनेको छ । ध्यान सुरु गर्नुअघि मेचमा बसेर वा भुईंमा पलैटी कसेर स्थिर भै बस्ने अभ्यास गर्नु जरुरी छ। यसरी बस्दा शिर, गर्दन र ढाडलाई एउटै रेखामा सीधा राख्नु जरुरी छ । यसरी आंखा बन्द गरेर हलचल नगरी केही समय बस्ने अभ्यास जरुरी हुन्छ ।
ध्यान सुरु गर्नु अघि १५, २० पल्ट लामो श्वास फेरेमा मन स्थिर राख्न मद्यत पुग्छ । यहांनिर केही मिनेट अनुलोमविलोम, भस्रिका वा कपालभाती प्राणायाम पनि गर्दा पनि लाभ हुन्छ । साथै ५, ६ पल्ट अ, उ, म अर्थात् ऊँ को उच्चारण गर्दा पनि लाभदायक हुन्छ । श्वासप्रश्वास र मनवीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ । मन चन्चल भएको वखत, मनमा रीस, उत्तेजना भएको वखत श्वास प्रश्वास छिटो, छिटो चल्न भने त्यसविपरित मन शान्त, स्थिर र विचार शून्य हुंदा श्वास पनि सूक्ष्म र ढिलो चल्छ । तसर्थ आएको र गएको श्वासमा ध्यान दिएर हेर्ने पध्दति, जसलाई विपश्यना भनिन्छ, आजभोलि निकै प्रचलित छ । यसरी आएको र गएको श्वासलाई निरन्तर महशूस गर्नाले अर्थात् हेर्नाले मनको चन्चलता हराउंछ र मन शान्त तलाउ जस्तो हुन्छ । ध्यानको समयमा सधैं आंखा बन्द गर्नु जरुरी हुन्छ ।
ध्यानको अर्को विधि हो, शरीरका सबै अंग, प्रत्यंगलाई एक, एक गरी महशूस गर्ने । यस अन्तर्गत शीर देखि पैतालासम्मका सबै अंगहरुको मनमनै नाम लिएर ती अंगहरुमा ध्यान दिने र महशूस गर्ने गरिन्छ । यसबाट शरीर हल्का र शिथिल हुन्छ । यो विधिलाई दोहर्याई, तेहर्याई पनि गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो विधि हो, आफू वरिपरिका विभिन्न आवाजहरुमा ध्यान दिने वा तटस्थ भै राम्रो, नराम्रो नभनी मूल्यांकन नगरी सुनिरहने । जस्तै चरीको चिर्विर्, गाडीको हर्न, मानिसको पाइला, कुकुर भुकेको, केटाकेटीहरु कराएको आवाज आदि सुन्ने । यसरी नजीक र टाढाको आवाज एक, एक गरी ध्यान दिएर सुन्दै जाने । यी तीन मध्ये कुनै एउटा अथवा एक पछि अर्को गरी तीनैवटा तरीका अपनाएर ध्यान गर्न सकिन्छ ।
माथि उल्लित तरीकाहरुमा अभ्यस्त भैसकेपछि अर्को चौथो तरिका पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यो हो, आंखा बन्द गरेर शरीरलाई स्थिर राखी मौनतालाई महशुस गर्दैजाने । त्यसबखत मनमा कुनै विचार वा भावना, वा नकारात्मक कुरा आएमा नआत्तिइकन ती, विचार, भावना वा नकारात्मक कल्पनालाई तटस्थ भै हेर्दै जाने । यसो गर्द ती विचार वा नकारात्मक भावनाहरु आफै हराउंछन् र अन्त्यमा मन शान्त हुन्छ । यसरी सुरुमा १० देखि १५ मिनेट ध्यान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ध्यान गहिरो हुंदै गए पछि मन स्थिर र विचार शून्य हुनुका साथै शरीर हल्का र श्वास पनि सूक्ष्म ढिलो हुन्छ । ध्यान गर्दा जति सक्दो सहज तरीकाले गर्न पर्छ । कुनै जवर्जस्ति गर्नु जरुरी छैन । विचार आएमा वा मन चन्चल भएमा पनि त्यसमा ध्यान नदिई गर्दै जाने र पछि सबै आफै सही बाटोमा आउंछ । श्वास, प्रश्वामा ध्यान दिंदा श्वासलाई ढिलो गर्न वा रोक्न जरुरी छैन, जसरी स्वाभाविक गतिमा श्वास जाने आउने गर्छ त्यसलाई एकनासले हेर्दै जाने मात्र हो । यसरी ध्यानको वखत आफ्नो मन, शरीर र श्वासमा आएको परिवर्तन, तरंग, कम्पन जे छ त्यसलाई पनि विना प्रयास महशूस गर्दै जाने ।
ध्यान खासगरी विहान वा वेलुकी खालि पेटमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर गर्ने इच्छा भएमा जुनसुकै समय, स्थानमा पनि गर्न सकिन्छ । ध्यान जस्तै हिजोआज माइन्डफूलनेसको पनि अभ्यास गर्ने गरिन्छ, जुन ध्यानमा सहायक हुन्छ । हिंड्दा, खांदा, दांत माझ्दा, नुहाउंदा वा अन्य कुनै काम गर्दा होस पूर्वक गर्नेलाई माइण्डफूलनेश भनिन्छ । यो एकप्रकारको सक्रिय ध्यान हो । यसबाट पनि धेरै लाभ लिन सकिन्छ । हिजोआज पश्चिमा देशतिर मनोवैज्ञानिकहरुे डिप्रेसन, एन्जाइटीका मानसिक रोगको उपचारमा औषधिको सट्टा ध्यान, प्राणायाम अर्थात् रिड्मिक ब्रिदिंग र माइण्डफूलनेसको अभ्यास गराउन थालेको पाइन्छ, जुन निकै प्रभावकारी सिध्द भएका छन् ।
सांसदले कोरोना भाइरसको बीमा गरौं भन्दा अर्थमन्त्रीले टेरेनन्, किन ?
बढ्यो चिसोः यी कुरामा ध्यान नदिए स्वास्थ्यमा आउन सक्छ समस्या
चुम्बन, अङ्कमाल वा हात मिलाउनुको सट्टा अब ‘नमस्कार’, नत्र हुनसक्छ कोरोनाको संक्रमण
वैज्ञानिकहरू कोरोना भाइरसको खोप बनाउन सक्रिय, मृत्यु हुनेको संख्या ८०० बढी
बियरले आयु बढाउँछ, दूधले रोगी बनाउँछः अध्ययन
यस पटक नेपालमै उपचार गरेर बल्ल ओलीले एउटा राम्रो काम गरेः दीक्षित
माधव घिमिरे र सत्यमोहन जोशीसहित १९ नागरिकले लेखे प्रधानमन्त्रीलाई मार्मिक पत्र
दुष्टहरुले छानीछानी हमला गरेको भन्दै प्रतिरोध गर्न कार्यकर्तालाई प्रमका सल्लाहकारको उर्दी
लक डाउनमा ९० शाखाबाट कृषि विकास बैंकले दियो सेवा
आयोगले दुई करोड सरकारलाई फिर्ता दिने निर्णय, कोरोना भाइरसको रोकथाममा सहयोग
एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड बुझायो, ‘बाँकी रकम लकडाउन खुलेको १५ दिनभित्र बुझाउनू’
भ्रमण बर्ष २०२० को सचिवालय वैशाखमा विघटन गरिने
नेपाल बैंकले सातै प्रदेशको कोरोना रोकथाम कोषलाई पाँच/पाँच लाख दिने
एनआईसी एशियाका ग्राहकलाई दराज अनलाइनबाट सामान खरिद गर्दा १०% छुट
कोरोना उपचार कोषमा नागरिक लगानी कोषले १ करोड २५ लाख योगदान गर्ने
खाना पकाउने ग्यास सकियो ? यी पाँच नम्बरमा फोन गर्नुस् पाइन्छ ग्यास